Isanga | Avril Stormy Unger · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
I-Avril Stormy Unger
Isimanga lungenelelo lokusebenza kwintengiso ephezulu e-Bangalore, e-India eqaqambisa ukungalingani kolwakhiwo oluhlala luxhasa ukufikelela kuluntu kwizidingo ezisisiseko ezifana nokunakekelwa kwempilo kunye namanzi acocekileyo. Isimanga sivavanya lo mbandela sisebenzisa isifaniso somfazi waseRajasthani oxhonywe kwilizwe liphela, ebonisa imifanekiso yobunkunkqele kunye nentlango.
Ibekwe ngaphandle kweJaisalmer, eRajasthan, eKhuri ihlala ihanjelwa ngumntu wasemzini onomdla kwiindunduma zayo ezinkulu kunye noluntu. Isigingxi similiselwe kubunyani obujamelene nezizwe zemveli zaseKhuri, ezibona abantu bangaphandle bonwabela ubunewunewu bombane kunye namanzi acocekileyo ngelixa kufuneka banqumle intlango yaseThar ngenxa yezidingo zabo ezisisiseko.
Umculi: I-Avril Stormy Unger
Indawo yokulala: 25: 27 imiz
Isanga kukungenelela kokusebenza kwiivenkile ezinkulu ezise Bangalore, eIndiya. Isimangalo sityhila ukungalingani kolwakhiwo okuhlala kusenza ukuba kube nzima okanye kuthintele ukufikelela koluntu kwiimfuno ezisisiseko ezinje ngononophelo lwempilo okanye amanzi acocekileyo. Isimanga sivavanya lo mxholo ngomzekeliso womfazi waseRajasthani oqhelekileyo kwilizwe jikelele owenza imifanekiso yokwazisa kunye nentlango.
Idolophana yaseKhuri, ebekwe ngaphandle kweJaisalmer eRajasthan, ihlala ityelelwa ngabaphambukeli abafuna ukubona iindunduma ezinkulu zentlabathi kunye noluntu lwasekuhlaleni oluthathwa njengolungaqhelekanga. Isigingxi similiselwe kubunyani babahlali baseKhuri, ababona abantu bangaphandle bonwabela ubunewunewu bombane kunye namanzi acocekileyo ngamaxesha onke xa benqumla kwiNtlango yaseThar bezenzela iimfuno zabo ezisisiseko.
I-Avril Stormy Unger - umgcini kunye nomculi, eIndiya
Unyana Giani -umvelisi, e-India
Prashansa Gurung -Umboniso bhanyabhanya, e-India
UNabi A. -Umhleli, eNew York
Paro - isandi, eIndiya
Njengenxalenye yokugxininiswa kokuqala kwe-Oyoun ngabalondolozi - abagcini, amagcisa kunye nabasebenzi bezenkcubeko- IITESHINI EZIMISELWEYO -kujongisiswe izazisi, ezokuzalwa kunye neenkumbulo eziqulethwe ngokusuka kwimbonakalo ye-diasporic, ye-decolonial kunye ne-queer. Uphando, ugcino, umboniso kunye neprojekthi yokusebenza ebandakanya ngaphezulu kwabantu abangama-70. Iziphumo, ukudibana kunye nemibuzo evela kwiiprojekthi ziya kuxoxwa ngexesha UMTSHATO WOBUGCISA OBUMISELWEYO thaca kwaye ibhiyozelwa.